Wararka - Sida Loo Sameeyo Qorshe Ganacsi oo Daqiiq Bur Wanaagsan Soo Saarista Daqiiqda
Sida Loo Sameeyo Qorshe Ganacsi Daqiiq Bur Fiican Soo Saarista Daqiiqda
Sida Loo Sameeyo Qorshe Ganacsi Daqiiq Bur Wanaagsan Soo Saarista Daqiiqda
Mashiinka si wanaagsan loo soo saaray ee mashiinada wax lagu karsado ayaa isbadal ku keenay dhirta shiida burka, suuqa burka ee Shiinaha. Warshadda weyn ee wax shiideysa waxay u egtahay inay qaadatay qayb weyn, mana ahan wax fudud wax soo saarkeedu sarreeyo, waxay leeyihiin qorshe ganacsi oo aad uga dhib badan kuwa kale. Qorshaha ganacsi ee wanaagsan maahan mudnaanta warshadaha waaweyn, dhirta yar yar iyo kuwa dhexe ee wax lagu shiido ayaa sameyn kara isla sidaas oo kale iyagana waa ay ka faa'iideysan karaan. Maaddaama qorshooyinka warshadaha waaweyn ee bur ay noqon karaan kuwo gaar ah oo dhammaystiran, talooyinka soo socda ayaa ka imanaya hal warshad bur bur sare oo ku taal Shiinaha.
Mashiinka Mashiinka Bur
1. Xakamaynta tayada qamadigaaga alaabta ceeriin: samee koox soo iibsata si ay u raadiyaan sarreenka la jaan qaadi kara heerarka wax soo saarkaaga. Tusaale ahaan - haraaga sunta cayayaanka ayaa ah qodob muhiim ah.
2. Xakamaynta geedi socodka wax soo saar leh: dhexdhexaad u noqo saamaynta nadiifinta markasta, go'aan ka gaadh cad iyo sida ay u shiideyso burka, la soco hawlgalka shaqaalaha si looga hortago cilladaha qalabka aan loo baahnayn iyo dhibaatooyinka nabadgelyada
3. Talaabo kasta oo lagu shaqeynayo waxaa lagu sameynayaa qolal gooni ah, sidaas ayaa looga hortagi karaa wasakheynta ka imaaneysa deegaanka kale.